Gbasara Anyị - Fujian Foen Aluminum Co., Ltd.
Fujian Foen Aluminum co., Ltd nke guzobere na 1988, nke di na Fuzhou obodo China, nwere ihe kariri square mita 1,333,000 nwere ihe kariri 3500 ndi oru. 20% n'ime ha bụ ọkachamara ma ọ bụ injinia. Anyị bụ ndị nrụpụta ọrụ ọkachamara na China na-arụpụta profaịlụ nke aluminom, igwe ojii, windo aluminom na siste ụzọ, mgbidi mkpuchi na akara ọla.
Anyị bụ ụlọ ụlọ 5 billet, 1 mpụta etiti, ahịrị 70, 4 ahịrị 4, 11 kwụ ọtọ na-acha aja aja ahịrị ahịrị, 1 ahiri ahiri edoziri akara, ahịrị osisi 1 grained na ahịrị 2 na-emepụta okpomoku; nke a na - eme ka mmepụta anyị kwa afọ rute ihe ruru 400,000.
Anyị na-ebunye ndị CNC nhazi na igwe maka profaịlụ nke aluminom, gụnyere mkpanaka ịkpụ, igwe nri, ntụpọ, igwe okwu, igwe nri, na -echi ụzọ, weld, wdg. A na-ebubata ọtụtụ ngwaọrụ igwe site na Germany, Denmark;
Anyị dị mma iwebata talent ndị dị elu ma nwee ndị otu ọkachamara ruru eru na mmepụta, teknụzụ, njikwa na arụmọrụ. Site na mbọ ndị afọ, anyị gafere ISO 9001, ISO 14001 na usoro nchịkwa OHSAS 18001, enyere ya aha nke Famous Brand na ụlọ ọrụ nzere nke China.
Anyị raara onwe anyị nye ịchụso kacha mma na ụkpụrụ nke 'Ihe kacha mkpa, Ndị ahịa kachasị, Ọrụ kachasị na Ebe E Si Nweta Ego'. Anyi aghaghi iwulite ulo oru mbu ya ma ama ama ya site na akara aka di elu.
Enlọ ngosi a hụrụ anya na-egosi ọtụtụ ngwa ahịa ndị mepụtara igboro ihe ndị ahịa chọrọ na ọnọdụ dị iche iche na ụdị ịchọ mma. anyị bụ ilekwasị anya na ọnụ ụzọ nchekwa dị elu na Windows. Emere ya na ikike ngachi eji eme ihe maka nchekwa dị elu. Site na ikike teknụzụ siri ike, teknụzụ dị elu na nke a kwadebere nke ọma, nchịkọta nke ngwaahịa, gụnyere ọnụ ụzọ na windo, mpịachi na ibo ụzọ na windo, ibo ụzọ Alumini, windo na windo, Aluminom na iko Louvres, fool windo, wdg